SA to fund Zimbabwe constitution? - NewsDay Zimbabwe
HomeLocal NewsSA to fund Zimbabwe constitution?
SA to fund Zimbabwe constitution?
Parliamentary Select Committee (Copac) co-chairperson Paul Mangwana yesterday told NewsDay the committee would gladly accept assistance from a “friendly neighbour such as South Africa” but they were not mandated to directly seek assistance from foreign countries.
Contacted for comment, the Minister of Constitutional and Parliamentary Affairs, Eric Matinenga, yesterday said he was not aware of such an offer.
Previous articleThree perish in accident
Next articleThousands attend Ndebele memorial service